बैङ्कहरुले ब्याजदर बढाए : कुनमा कति ब्याजदर छ ? - सफल नेपाल
२०७८ मंसिर २२ बुधबार, ०९:५८
बैङ्कहरुले ब्याजदर बढाए : कुनमा कति ब्याजदर छ ?
आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास सुरु भएसँग बैङ्कहरूले धमाधम बचत तथा मुद्दतीको ब्याजदर बढाउन थालेका छन् । सोमबार बैङ्कहरूले सार्वजनिक गरेका सूचनाका आधारमा बैङ्कहरूले मुद्दतीको ब्याजदर बढाएर ११.६७ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् ।
बैङ्कहरूमा तरलताको अभाव हुन थालेपछि भएको बचतलाई आफ्नैमा राख्न र अन्य बैङ्कको बचत पनि आफ्नोतर्फ तान्न ब्याजदर बढाएका हुन् ।
हिमालयन बैङ्कले मुद्दतीको ब्याजदर बढाएर सबैभन्दा बढी ११.६७ प्रतिशतसम्म पु¥याएको छ । त्यस्तै, एनआईसी एसिया बैङ्कले ११.१ प्रतिशत, नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कले १०.२८ प्रतिशत माछापुच्छ्रे बैङ्कले ९.८५ प्रतिशत, कुमारी बैङ्कले १०.३१ प्रतिशत, सिभिल बैङ्कले १०.६१ प्रतिशत, एनसीसी बैङ्कले १०.५५ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर तोकेका छन् ।
अघिल्लो त्रैमासमा सात प्रतिशतसम्म झरेका यस्ता कर्जा बैङ्कहरूले बढाएर करिब १३.८९ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् ।
असोजको क्लोजिङसँगै बैङ्कहरूले धमाधम ब्याजदर बढाएको सूचना जारी गरेपछि सेयर बजारमा दबाब परेको बजार विश्लेषकहरूले भनाइ छ । सोमबार २१८ कम्पनीका ८७ लाख ७६ हजार ३३७ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा कुल दुई अर्ब ९६ करोड ६८ लाख ९९ हजार रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । कारोबारमा आएका १३ समूहमध्ये व्यापार समूहबाहेक सबै समूहको परिसूचक घटेर बजार बन्द भएको छ । व्यापार समूहको परिसूचक १८.९४ अङ्कले बढेको हो ।
कारोबारको आधारमा नबिल बैङ्क अग्रस्थानमा छ । उक्त बैङ्कको नौ करोड ८९ लाख ९८ हजार ५१८ रुपियाँको कारोबार हुँदा अन्तिम सेयर मूल्य एक हजार ४६८ रुपियाँ कायम भएको छ । सानिमा बैङ्कको पनि नौ करोड ८१ लाख ७४ हजार रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार हुँदा अन्तिम सेयर मूल्य ४९९ रुपियाँ कायम भएको छ । उच्च कारोबार गर्ने अन्य कम्पनीमा हिमालयन डिस्टिलरी, अपि पावर कम्पनी, नेपाल बैङ्क रहेका छन् ।
कारोबारबाट अधिक आम्दानी गर्ने कम्पनीमा ११ प्रतिशत एनआईसी एसिया डिवेञ्चर, महालक्ष्मी विकास बैङ्क, एनआईसी एसिया सेलेक्ट फन्ड ३० रहेका छन् । त्यस्तै घालेम्दी हाइड्रो पावरका लगानीकर्ताले १० प्रतिशतसम्म गुमाएका छन् । –रासस
२०७८ कार्तिक २ गते सम्पादित l ०९:३८